कान्छीले सबै सम्पति कब्जा गरेपछि जेठीको साथमा श्रीमती पि’डित ! भाबुक हुदै अन्तिम पटक मिडियामा (भिडियो सहित)
Homeसमाचारकान्छीले सबै सम्पति कब्जा गरेपछि जेठीको साथमा श्रीमती पि’डित ! भाबुक हुदै अन्तिम पटक मिडियामा (भिडियो सहित)
January 14, 2020 Spnews समाचार Comments Off on कान्छीले सबै सम्पति कब्जा गरेपछि जेठीको साथमा श्रीमती पि’डित ! भाबुक हुदै अन्तिम पटक मिडियामा (भिडियो सहित)
महिला अधिकारका विषयहरुमा धेरै बहस भएका छन् । धेरै छलफल भएक छन् । कुनै महिलालाई अप्ठेरो परे महिला अधिकारको कुरा जोडबलले उठ्छ उठ्नु पनि पर्छ । अझ महिला माथि हुने घरेलु हिं’शा, शो’षणका कुराहरु उठाइरहदा नेपालमा पुरुष माथि चाहिँ यस्ता समस्या छन् छैनन भन्ने विषयमा कसैले ध्यान दिएको पाइदैन । एउटा परिवारबाट महिलामाथि घरेलु हिं’शा हुन सक्छ, एउटी श्रीमतीलाई श्रीमान्ले विभिन्न ट’र्चर दिन सक्छ भने महिलाले दिन सक्लिन कि नसक्लिन ?
आफ्नै कान्छी पत्नीबाट पुरुष हिं’शाको शि’कार भएका तेजबहादुर भण्डारी पूर्व सैनिक हुन् । अफगानिस्तानमा करिब ८ वर्ष ज्या’नको बा’जी राखेर फर्केका भण्डारी त्यस अवधिमा करोड रुपैयाँ हारहारीमा कमाएका थिए । उनले कमाएको सबै रकम श्रीमतीलाई पठाउथे । आफुलाई लगभग पुग्ने जति कमाएँ जस्तो लागेपछि घर परिवार सँगै बस्ने निधो गरेर उनि नेपाल फर्केका थिए ।
नेपाल फर्केपछि घर झ’गडा बढ्न थाल्यो र घर परिवारमा झन समस्या आउला कि भन्ने डरले श्रीमतीको कु’टाइ समेत खान बाध्य भए उनि । ब’द्नाम हुने ड’रले पनि श्रीमतीको कु’टाइ सहेर बसे तर अन्त्यमा कान्छीले सबै सम्पति कब्जा गरेपछि जेठीको साथमा श्रीमती पि’डित भण्डारी मिडियामा आउँन बाध्य भए । मानिसहरुले उनलाई गा’ली पनि गरे । अब अन्तिम पटक मिडियामा आएको छु भन्दै निकै भावुक भएका छन् । हेर्नुस् तलको भिडियो :
पृथ्वीतर्फ तीव्र गतिमा आउँदैछ धुमकेतु ! वैज्ञानिक दिए यस्ताे चेतावनी
उपसभामुख शिवमाया नै सभामुख पदको सशक्त उम्मेदवार हुन् : प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ